Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်|လက္ခဏာများ|အကြောင်းရင်းများ|Risk factors|ရောဂါအဖြေရှာခြင်းနှင့် ကုသမှု
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
Appendicitis ဆိုတာ အူအတက် ရောင်တာကို ပြောတာပါ။ အူအတက်ဆိုတာ အူမကြီးမှာ တွယ်ကပ်နေတဲ့ ပြွန်ပုံစံ အင်္ဂါအစိတအပိုင်း သေးသေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက ဗိုက်အောက်ပိုင်းညာပဘက်ခြမ်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ၎င်းက ဘာမှမလုပ်ပေမဲ့ ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ ခန္ဒါကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးလာနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ပါရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အူအတက်ရောင်တာက အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၃၀ ကြားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဓိကရောဂါလက္ခဏာကတော့ ဗိုက်အောင့်တာဖြစ်ပြီး ချက်ရဲ့ အနီးအပေါ်အလယ်ပိုင်းမှာ စပြီးအောင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းနာတာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်၏ ညာအောက်ပိုင်းထောင့်တစ်နေရာထိ ရွေ့သွားတတ်ပါတယ်။ လှုပ်၇ှားမှု၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှင့် ခန္ဒါကိုယ်လိမ်လိုက်တာတို့မှာဆိုလျှင် ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်း သို့ ဝမ်းလျှောခြင်း
ကုသမှု ခံယူရန်နှောင့်နှေးခြင်းဟာ ရောင်နေတဲ့ အူအတက်ကို ပေါက်ထွက်စေပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာ အူအတက်ရောင်ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ရှိလာခြင်း
ညာဘက် ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာခြင်းက တော်တော်နဲ့ မသက်သာခြင်း
ဝမ်းလျှောခြင်း သို့ သွေးဝမ်းသွားခြင်း
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အူအတက်ရောင်သေတာကို အဓိကဖြစ်စေတာကတော့ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မှုက မစင်ကြောင့်၊ တခြားပြင်ပအရာ သို့ ကင်ဆာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်လျှင် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေက ကြီးထွားပြီး ပွားများလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းက အူအတက်ကို ရောင်စေပြီး ပြည်တွေနဲ့ ပြည့်စေပါတယ်။ အူအတက်ပေါက်သွားလျှင် ဘက်တီးရီးယားတွေက ပြန့်နှံသွားပြီး ခန္ဒါကိုယ်မှ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကို ကူးစက်စေပါတယ်။ တချို့လူနာတွေမှာ အူအတက်က ရောဂါပိုးတခုခုကြောင့်လဲ ရောင်တတ်ပါတယ်။
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Appendicitis( အူအတက်ရောင်ခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မိသားစုဝင်တွေမှာ အူအတက်ရောင်ခြင်း သို့ cystic fibrosis ဖြစ်ဖူးခြင်း
အမျှင်ဓါတ်နည်းပြီး ကဆီဓါတ်များတဲ့ အစာများ စားခြင်း
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်တော်တဲ့ အဖြေရရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်က အောက်ပါစစ်ဆေးမှုတွေကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ နာကျင်တဲ့ နေရာကို သိနိုင်ရန် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ နာကျင်မှုက ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း သို့ ကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် ဟုတ်မဟုတ် ဆီးစစ်ကြည့်ခြင်း
ဓါတ်မှန်၊ ဝမ်းဗိုက်အက်ထရာဆောင်း သို့ ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်တွေလဲ ရိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အူအတက်ရောင်တာကို ကုသတာကတော့ အူအတက်ကို ဖယ်ရှားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို အူအတက်ခွဲခြင်း (appendectomy) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အူအတက်ခွဲခြင်းက အများဆုံးလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ခွဲစိပ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ အူအတက်ခွဲခြင်း ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
Laparpscopy appendectomy ။ ။ မှန်ပြောင်းပါတဲ့ ပြွန်ချောင်းလေးကို ဝမ်းဗိုက်တွင်း ထည့်ကြည့်ပြီး အူအတက်ကို ဖယ်ရှားတဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Open appendectomy ။ ။ ဝမ်းဗိုက်ညာဘက်ပိုင်းမှာ ခွဲရာပေးပြီး အူအတက်ကို လှီးထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက ရောဂါပိုးအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများပေးခြင်း၊ အနာသက်သာဆေးများ နှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းတွေ အတွက် ဝမ်းပျော့ဆေးများပေးနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုလျှင် လူနာအများစုက ဆေးရုံမှာ တစ်ရက်လောက်သာနေရပြီး ခွဲစိပ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲ အိမ်ပြန်လို့ ရလေ့ရှိပါတယ်။ ပိုဆိုးတဲ့ အူအတက်ပေါက်ပြဲသွားတဲ့ အခြေအနေတွေဆိုလျှင်တော့ ဆေးရုံတက်ရက်တွေ ပိုမို ကြာနိုင်ပြီး အကြောထဲသို့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ သွင်းရနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း) ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
သင်ဟာ သင့်ရဲ့အူအတက်ရောင်ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဆရာဝန်အားပြောပြခြင်းဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ခွဲစိပ်ပြီး ဆေးသောက်နည်းတွေ၊နှင့် အနာကို ဂရုစိုက်နည်းတွေကိုလည်း လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ခွဲစိပ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲတွေ ရှိမရှိ သိနိုင်ရန် ပြန်လည် စမ်းသပ်ခြင်းတွေကို ခံယူပါ။
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page
John Wiley & Sons, Inc, 2009. Print edition. Page 203.
Appendicitis. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/appendicitis/. Assessed Jul 13 2016